विश्वकप विजेतालाई पैसै–पैसा - खेलकुद - साप्ताहिक
विश्वकप विजेतालाई पैसै–पैसा
रूसमा जारी २१ औं विश्वकप विजेताले कति पैसा पाउलान् ? यो जिज्ञासा हामी सबैमा छ । विश्वकपको हरेक संस्करणमा पुरस्कार राशि बढ्दै गएको तथ्यप्रति हामी अनभिज्ञ छैनौं । यसै क्रममा २१ औं विश्वकपमा सहभागी टिमहरूले विश्वकपमा सहभागिता जनाएबापत वा चरण समूहदेखि फाइनल चरणसम्मको खेलमा सहभागी हुने सबै टिमले हारे पनि जिते पनि पुरस्कार बापत कुल ८४ अर्ब ६३ करोड ७० लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । यो रकम अघिल्लो विश्वकपको तुलनामा २३ अर्ब ५० करोड ६० लाख रुपैयाँले बढी हो । यो पुरस्कार राशीमा फिफाले दिने फेयर प्लेयर पुरस्कार, विश्वकपमा सम्बन्धित देशबाट आफ्ना खेलाडीलाई खेल्न छुट दिने क्लबले पाउने क्षतिपूर्ति रकम समेत समावेस गरिएको छ ।
यसमध्ये विश्वकप जित्ने टिमले ४ अर्ब ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेता टिमले ३ अर्ब रुपैयाँ पाउनेछ । त्यसैगरी तेस्रो हुने टिमले २ अर्ब ५७ करोड ६० लाख रुपैयाँ तथा चौथो हुने टिमले २ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । यो त भयो सेमिफाइनल पुग्ने टिमहरूको उपलब्धि । अब हेरौ क्वाटरफाइनलमा हार्ने टिमले कति पाउँछन् ? फिफाले जारी गरेको सूचनाअनुसार क्वाटरफाइनल हार्ने प्रत्येक टिमले १ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।
यसैगरी, राउन्ड–१६ मा हार्ने टिम पनि अर्बपति हुनेछन् । यी ८ टिम प्रत्येकले १ अर्ब २९ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यो त भयो पहिलो चरणमा पार गर्ने टिमहरूको इनामी लेखाजोखा । अब हेरौं, पहिलो चरणबाटै बाहिरिने टिमले प्राप्त गर्ने रकम कति होला ? फिफाले जारी गरेको पछिल्लो सूचनाअनुसार दोस्रो चरणमा नउक्लिने अर्थात् १७ औं देखि ३२ औं स्थानसम्म रहने प्रत्येक टिमले ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँ हात पार्नेछन्, जोसँग आबद्ध खेलाडी विश्वकपमा देखा पर्नेछन् । यो तथ्यांकअनुसार फुटबलको यो महाकुम्भमा पुगेर एउटै खेल नजित्ने टिमले पनि करोडौ रुपैयाँ हात पार्ने देखिन्छ ।
यसबाहेक विश्वकपमा सहभागी हुने ३२ वटै मुलुकलाई फिफाले प्रतियोगिताको तयारीका लागि मात्र १६ करोड रुपैयाँ दिनेछ भने फिफाको क्लब बेनिफिट कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्ना खेलाडीलाई सम्बन्धित देशबाट विश्वकपमा सहभागी हुन छुट दिने क्लबहरूले पनि २२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यसबाहेक फेयर प्ले ट्रफी जित्ने खेलाडीले ५४ लाख ४० हजार रुपैयाँ छुट्टै प्राप्त गर्नेछन् ।
यसअघि विश्वकपमा कसले कति पाए ?
पुरस्कारको दृष्टिकोणले २१ औं विश्वकप सबैभन्दा ठूलो खेलकूद आयोजना हुनेछ । तैपनि, यसअघिका विश्वकप पनि पुरस्कार दिने मामिलामा त्यतिबेलाको समयअनुसार निकै अगाडि थिए ।
सन् १९७८ को ११ औं विश्वकपसम्म विश्वकपमा सहभागी हुने टिमले कति पैसा पाएका थिए भन्ने कुरा फिफाले आधिकारिक रुपमा जारी गरेको छैन । सन् १९८२ को १२ औं विश्वकपमा पुरस्कार राशिका रूपमा २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो भने सन् १९८६ को १३ औं विश्वकपमा २ अर्ब ७८ करोड २० लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । त्यसपछि सन् १९९० को १४ औं विश्वकपमा फिफाले पुरस्कार राशिलाई दोब्बर बनाउँदै ५ अर्ब ७७ करोड ८० लाख पुर्‍याएको थियो । त्यसपछि १९९४ को १५ औं विश्वकपमा उक्त पुरस्कार राशि बढेर ७ अर्ब ५९ करोड ७० लाख पुग्यो ।
सन् १९९८ को १६ औं विश्वकपमा पहिलो पटक फिफाको पुरस्कार राशिले १० करोड डलर नाघेर १० करोड ३० लाख पुग्यो । जुन नेपाली रुपैयाँमा ११ अर्ब २ करोड १० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यसपछि जापान र दक्षिण कोरियाले संयुक्त रूपमा एसियामा पहिलो पटक आयोजना गरेको १७ औं विश्वकपमा पुरस्कार रकम वापत १६ अर्ब ७५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुग्यो । सन् २००६ मा जर्मनीले आयोजना गरेको १८ औं विश्वकपमा पुरस्कार राशी २८ अर्ब ४६ करोड २० लाख रुपैयाँ थियो भने सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिकाले आयोजना गरेको १९ औं विश्वकपमा पुरस्कार राशि ४४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुग्यो । त्यसपछि अघिल्लो अर्थात् २० औं विश्वकपमा ६१ अर्ब ६३ करोड २० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरियो ।
प्रकाशित :असार ७, २०७५
विश्वकप क्रिकेट सेमिफाइनल समीकरण
भारतको जर्सी विवाद असार २१, २०७६